Kusemnyama ngomqeqeshi weBafana Bafana | News24
Kusemnyama ngomqeqeshi weBafana Bafana
PHOTO: safa.netObambe njengomqeqeshi we-Bafana Bafana u-Owen Da Gama.
KUSEMNYAMA futhi akukacaci ukuthi ubani ozoba ngumqeqeshi weqembu lesizwe iBafana Bafana.
Inkinga wukuthi noma iSouth African Football Association (Safa) ibifuna ukwethula umqeqeshi omusha ngokushesha kodwa amadoda ekade yethembele kuwona sekulukhuni ukuwathola.
Iqiniso lithi abaqeqeshi abahlonishwa umhlaba wonke ne-Africa yonkana njengo Carlos Queiroz, Hervé Renard (Morocco) no Hugo Broos angeke besatholakala, futhi-ke nemali abakade bezoyihola ibizomba eqolo kakhulu.
Phela uQueiroz uke waqeqesha izwe lakhe iPortugal kanye ne-Iran muva nje. Wonke umhlaba uyazi ukuthi lelizwe lase-Iran lidume ngamandla ka woyela futhi nemali akade bemholela yona ibimnandi igculisa, futhi akakaze ayihole empilweni yakhe.
UBroos ubeqeqesha iCameroon kamuva nje kanti ibhola lase-Afrika ulazi kahle futhi-ke uthathwa njengeqhawe lakhona.
Lokhu kufakazelwe ngesikhathi edla umhlanganiso nama Indomitable Lions kwi African Cup of Nations ngenyanga edlule.
Okunye okuhlupha uSafa wukuthi kulezinsuku ubufuna ukuthula umqeqeshi ozovala indawo kaEphraim “Shakes” Mashaba osanda kuxoshwa emva kokuphoxa obasi bakhe kumabonakude.
Kubikwa ukuthi kulezinsuku uSafa ubamba uyayeka ngoba phela lesikhundla sikaMashaba kufuneka sivaliwe.
Okunye okuthusayo wukuthi i-Safa manje isiqala ukubheka noma ukushela abaqeqeshi abafana noStuart Baxter we-SuperSport United nowake wayiqeqesha iBafana Bafana.
Kanti omunye ukhosha abazama ukukhulumisana naye owayeqeqesha i-Orlando Pirates uRuud Krol.
Imibiko ithi abaqeqeshi ababukeka bengaqasheka noma asebesele ohlweni lwe-Safa yilaba bobabili kuphela.
UBroos uthe yena usafuna ukuthatha ama-Indomitable Lions awayise kwi-Fifa Confederations Cup e-Russia ngoJune nango 2019 kwi-Afcon ekhaya.
Isikhulu se-Safa nesiyi CEO uDennis Mumble uthi ukuqoka umqeqeshi we-Bafana Bafana kubalulekile nokuthi kuzoshesha kodwa wangavuma ukuqagula igama lozothatha nosuku olungumnqamulajuqu.
“Siphezu kwalo udaba noma kungelula. Siyazi futhi ukuthi sahluleka ukuqoka umqeqeshi ngosuku esasilushilo. Asisafuni noma ngingathi akuphephile ukulokhu sithinta amagama abantu ngoba abaqashi bayazwela. Abanye basandakungena enkingeni ngoba amagama abo ayebaliwe kwabazoqasheka,” kusho uMumble.
Okwamanje umqeqeshi u-Owen Da Gama uzoqhubeka esebenza njengebamba lomqeqeshi.
Umongameli weSafa uDkt Danny Jordaan walile ukuphawula ngaloludaba, wathi kunekomiti elibhekene naloludaba.